योर्क ह्याम र पनीर क्रेप्स - Thermomix व्यञ्जनहरु | ThermoRecipes
योर्क ह्याम र पनीर क्रेप्स
उसको लागि जन्मदिन मेरो भाइ को एक बाहेक पाइ, मैले ह्याम र पनीर को यी क्रेप्स तयार गरे ताकि पार्टी मीठो र स्वादिष्ट चीजहरु हुनेछ।
स्यान्डविच हानि छ कि जब उनीहरु टेबल मा एक समय को लागी गरीएको छ रोटी धेरै सुक्खा हुन्छ र ती सबै लगभग अछूता रहन्छन्। अर्कोतर्फ, क्रेप्स राम्रो संग पकड र उनीहरु धेरै मौलिक छन्।
तपाइँ उनीहरु संग तयार गर्न सक्नुहुन्छ अग्रिम। एक दिन तपाईंले तिनीहरूलाई बनाउनु भयो र तिनीहरूलाई प्लास्टिकको र्‍यापमा बेर्नु अघि, घटनाको दिन तपाईंले तिनीहरूलाई प्लास्टिकबाट मात्र लपेट्नुपर्नेछ, साना टुक्रामा काट्नुपर्नेछ र राम्रो स्रोतमा राख्नुहुनेछ। कोठाको तापक्रममा रहनको लागि, तिनीहरूलाई तालिकामा लैजानु भन्दा १ घण्टा पहिले आदर्श गर्नु हो।
त्यसो गरेर म तपाईंलाई आश्वसन दिन्छु कि त्यहाँ कोही बाँकी छैन। मेरो भाइको जन्मदिन मा सबैले सोधपुछ हेर्यो तर जब उनीहरूले एउटा प्रयास गरे, उनीहरू पहिले नै थिए तिनीहरूले ती खाना खान छोड्दैनन्।
1 योर्क ह्याम र पनीर क्रेप्स
पार्टीहरु र जन्मदिन को लागी एक आदर्श भूख जो अग्रिम बनाउन सकिन्छ।
काटिएको पकाइएको ह्यामको १०० ग्राम
काटिएको चीजको २०० ग्राम
क्रेप आटाका लागि:
२०० मिलि दूध
१ चम्मच रक्सी (वैकल्पिक)
हामी रक्सीको साथ माखन पिघल्यौं Minutes मिनेट, º ०º, गति 2/ १/२। हामी फिर्ता र आरक्षित।
गिलास धुने बिना, हामी अण्डा हराउँछौं २ मिनेट गतिमा 2/ १/२.
आटा, दूध, वेनिला र नुन जोड्नुहोस्, कम्तिमा मिश्रण गर्नुहोस् Seconds सेकेन्ड गतिमा। रक्सीको साथ पग्लेको माखन थप्नुहोस्। हामीले यसलाई एक घण्टा आराम गरौं।
हामी माछाले पकाएको प्यानमा एउटा भर्या। वा दुई पिठो हाल्दैछौं, ती दुवै तर्फ सुनहरी खैरो छोड्दै।
हामी वेफरहरू फैलाउँदछौं, पकाएको ह्यामको दुई स्लाइसहरू र दुई चीजको शीर्षमा राख्छौं र रोल अप गर्दछौं। र हामी तिनीहरूलाई प्लास्टिक र्यापमा बेर्छौं।
हामीले त्यसलाई काटेर सेवा दिन्छौं।
थप जानकारी - चकलेट र क्रीम जन्मदिन केक
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: एपेटाइजरहरू, सजिलो, गर्मी रेसिपी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » एपेटाइजरहरू » योर्क ह्याम र पनीर क्रेप्स
धेरै राम्रो र सजिलो रेसिपी। साथै, यसलाई छोड्नको लागि सक्षम हुनु पहिले राम्रो दिन हो। धन्यवाद!
मैले कहिल्यै भ्यानिला प्रयोग गरेको छैन, के यो तरल, पाउडर हो?
भनिला एक कालो पोड हो कि या त पूर्ण प्रयोग गर्न सकिन्छ वा यसलाई खोल्न सकिन्छ र साना बीजहरू हटाइन्छ। तर यस अवस्थामा तिनीहरूले भेनिला सार प्रयोग गरेका छन् जुन कालो तरल हो। तपाईं यसलाई फ्लान खामहरू, दहीको नजिक सुपरमार्केटमा फेला पार्नुहुनेछ।
म आशा गर्छु कि मद्दतले तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ!
यसको तरल पदार्थको सट्टामा, मैले भनिला चिनी प्रयोग गर्‍यो। र वेनिला को अन्य प्रकारहरु पहिले नै Mayra द्वारा तपाइँलाई समझाईएको छ।
धेरै धनी र सरल, तर एक प्रश्न। फोटोमा पनीर पग्लिएको देखिन्छ, यो के चीज हो? के तपाईंले ओभनमा अलिक अलि अगाडि राख्नुभयो?
हेलो पेट्रीसिया, चिज काटिएको छ, यो पग्लियो जस्तै बाहिर आउँछ, किनभने भर्ना अझै तातो छन् र म तिनीहरूलाई रोल अप गर्छु र तिनीहरूमा न्यानो हुँदा प्लास्टिकको र्याप राख्छु, त्यसैले उनीहरूले त्यो बनावट लिन्छन् र त्यसैले उनीहरू डोन गर्दैनन्। ' t या त खोल्नुहोस्।
उनीहरू धेरै राम्रो देखिन्छन् र म तिनीहरूलाई बनाउनको लागि उत्सुक छु, तर मेरो थर्मोमिक्स एक पुरानो मोडेल हो (टीएम २१)। के तपाई मलाई बताउन सक्नुहुन्छ जुन गतिको ११/२ बराबर छ?
धेरै धेरै धन्यबाद, धन्यबाद।
मूर्त रूप भन्यो
मैले ती नुस्खेहरू प्राप्त गरेको छैन किनकि मैले आज नुस्खा पाएको छु ... उनले प्रयोग गर्ने चीज काटिएको छ, उसले यसलाई लगभग सुरुमा राख्छ, घटक भागमा। र मलाई लाग्दछ कि भट्टीले केहि भन्दैन ... वा कम्तिमा मैले यो उल्लेख गरेको छैन ... हेरौं कसरी तिनीहरू हेहे छन् नुस्खाका लागि धन्यबाद
Incarni लाई जवाफ दिनुहोस्
म तपाईलाई धेरै आभारी हुनेछु यदि तपाईले म नोभेम्बर asked मा सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ (गति २१/२ बराबर टीएम २१ मा), अर्को सोमबार मेरो एउटा सगाईको खाना छ र म यो गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।
गति १ १/२ छ?
नमस्ते पिलर, सर्वप्रथम पहिला तपाईंलाई जवाफ नदिएकोमा दु: खी छ, जुन मैले अनुहारमा राखेको थिएँ, मेरो कम्प्युटरले मलाई केही दिन ब्लगमा पहुँच गर्न अनुमति दिदैन। र दोस्रो कुरा म समानताको खोजी गर्दै थिएँ, हेर्नुहोस्, म तुलनात्मक हिसाबले tmx को संसारमा भएको हुँ, तर अनुसन्धान गर्दै, मलाई लाग्छ कि यो कसरी हराउने छ, किनकि यो उही गति वा १ tmx1 मा हुन सक्छ, तर यसमा पुतली राख्दै। मलाई भन्नुहोस् यो कसरी जान्छ ...
र फेरि ढिलाइको लागि माफ गर्नुहोस्।
नमस्ते गुणहरू, सर्वप्रथम मलाई जवाफ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, आज मैले तिनीहरूलाई (बटरफ्लाइ बिना डेढ गतिमा) बनाएको छु, तिनीहरू धेरै राम्रा छन् तर मैले सबै क्रेपहरूसँग एकल रोल बनाएको भए पनि। दुई घन्टा भन्दा बढी आराम गरे, तपाईंले तिनीहरूलाई धेरै सावधानीपूर्वक ह्यान्डल गर्नुपर्दछ किनभने तिनीहरू तुरुन्तै "खुले" छन्, अर्को पटक म रोलहरू एकै पटक बनाउनेछु।
यस्तो सरल र स्वादिष्ट व्यंजनहरु को लागी धेरै धन्यबाद।
एक प्रश्न जुन सायद धेरै स्पष्ट देखिन्छ।
के मदिराको साथ माखन थर्मोमा पग्लन्छ र यसलाई पछि मिश्रणमा थप्न आरक्षित छ? धन्यबाद
म मेरी छोरीको जन्मदिनको लागि यो नुस्खा हेर्दै छु, तर मलाई यो बुझेको छैन, पीठो बनाए पछि यसलाई आराम दिएर, भेला पार्नु के यो जिप्सी बाहु हो जस्तो गरी बनाइएको हो? र यो प्यानमा कहिले राखिन्छ? वा यो एक एक गरी गर्दैछ? सत्य यो हो कि म एकदम हराएको छु
नमस्कार कार्मेन, यो सजिलो छ, तपाईंले देख्नुहुन्छ, तपाईंले आटा बनाउनुहुन्छ र आराम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईं यसलाई पनमा अलि अलि बनाउनुहुन्छ, मानौं तिनीहरू राम्रा मिठाईहरू हुन्, तब जब तपाईंसँग यो हुन्छ, तपाईं भर्नुहुन्छ, अझै तातो छ, त्यसोभए यो रोल अप हुन्छ, कम्प्याक्ट हुन्छ र चीज अलि पग्लन्छ। मँ आशा गर्दछु कि तपाईले अरु केही स्पष्ट गर्नु भएको छ, यदि तपाईले मलाई भन्नु भएन।
हो, धेरै धेरै धन्यवाद
अर्को दिन मैले यी क्रेपहरू खानाको लागि बनाईं र त्यसलाई एपेटाइजरको अंशले काटें र ती स्वादिष्ट थिए, एउटा पनि बाँकी रहेन !!! यसबाहेक, अग्रिम तिनीहरूलाई गर्न सक्षम हुनु भव्य छ!
क्यारोलिना पाल्मेरा भन्यो
नमस्ते सद्गुण, म वास्तवमै यो नुस्खा बनाउन चाहन्छु, यो मेरो जन्मदिन चाँडै हो र म यसलाई स्टार्टरको रूपमा बनाउन चाहान्छु। तिनीहरू तातो हुँदा, तपाईं तिनीहरूलाई पारदर्शी फिल्ममा लपेट्नुहुन्छ ... तर तपाईं कहिले यसलाई हटाउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई सानो टुक्रामा कटौती गर्नुहुन्छ? के तपाईं यसलाई काट्नको लागि यसलाई कूल हुनको लागि कुर्नुहुन्छ? धन्यबाद
क्यारोलिना पाल्मेरालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते क्यारोलिना, यदि तपाईं जन्मदिन मा एक एपीरिटिफ को रूप मा राख्न जाँदैछन् भने, आदर्श यो केहि घण्टा अघि गर्नु हो, तपाईं कम तनावग्रस्त हुनुहुन्छ, र तिनीहरू शीतल छन्, तपाईं यसलाई एक दिन अघि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ मेरो भाइको जन्मदिनको लागि छु। मैले तयार पारेको छु। म यसलाई न्यानोमा लपेट्छु, ताकि उनीहरूले पाउँदैनन्, यदि तपाईंले उनीहरूलाई उपभोग गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने उनीहरू थोरै शान्त हुन पर्खनुहोस्। उस्तै स्वभाव पनि राम्रो छ, तर मलाई थाहा छैन कि यसले तपाईंको लागि खोल्छ कि भनेर।
तपाईंले हामीलाई पहिल्यै बताउनुभएको छ।
नमस्ते, त्यहाँ केहि छ जुन मलाई स्पष्ट छैन, यदि तपाईं अघिल्लो दिन गर्नुभएमा, अर्को दिन सम्म तपाईं फ्रिजमा राख्नुहुन्छ, वा तपाईं यसलाई कोठाको तापक्रममा छोड्नुहुन्छ? र अर्को कुरा, जब तपाईं एक चम्चा वा २ थपिएको भन्नुहुन्छ, तपाईंको मतलब भान्साको सॉस प्यान हो? म कल्पना गर्छु कि आटा थोरै मोटा हुनुपर्दछ, हैन?
यदि मैले फ्रिजमा, र पुरानो पुरानो ठाउँमा राख्छु भने, यो प्यानमा र तपाईं आफूले दिन चाहानु भएको मोटाई र आकारमा निर्भर गर्दछ। अभिवादन
नमस्ते, म यो नुस्खा बनाउन चाहन्छु, तर मलाई ग्लुटन-रहित पिठोले राम्रोसँग काम गर्छ कि भनेर कसैलाई थाहा छ कि जान्नु पर्छ। भनिला सारको रूपमा, कसैलाई थाहा छ यदि यो ग्लुटन मुक्त छ भने?
नमस्ते कार्मेन, सत्य यो हो कि म तपाईंलाई भन्न सक्दिन, यो प्रयास गर्ने कुरा हुनेछ, म कल्पना गर्छु कि यदि पिठो सामान्य जस्तो कार्य गर्दछ भने, त्यहाँ कुनै समस्या हुनेछैन। र भेनिला सारको विषयमा, यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, यसलाई नथप्नुहोस्, किनभने एक तयारी भएकोले मलाई थाहा छैन यसमा केही समावेश छ कि छैन, यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने तपाइँले यसलाई थोरै वेनिला चिनीले बदल्न सक्नुहुन्छ, तर उही चीज। मलाई थाहा छैन यदि यसले केहि समावेश गर्दछ भने, यदि होईन भने पनि तपाईले त्यसलाई भित्र फालिदिनुभयो, केहि पनि हुँदैन, यसलाई केही गन्ध दिनुपर्दछ।
हाई, मैले अर्को दिन उनीहरूलाई गर्‍यो तर तिनीहरू धेरै राम्रा बाहिर आए तर थोरै बेल्ट थिए। म जान्न चाहान्छु कि यदि त्यसो हो किनकि मैले तिनीहरूलाई चिसो क्रेप्सले गुमाएको छु? किनभने अन्यथा मैले चिठीको लागि नुस्खा पछ्याईयो भनाइला थप्नको सट्टा, भनिला चिनी थप्ने?
क्राइप आटा दुबै मीठो र मीठो बनाउने व्यंजनहरूको लागि मान्य छ, त्यसैले के म सामान्यतया गर्दछु उनीहरूलाई बिभिन्न स्पर्श दिन्छन्। जब यो मीठो चीजको लागि हुन्छ म 1 चम्चा चिनी र भेनिला वा दालचिनी थप्दछु। र यदि ती प्यासी बनाउने विधिहरू हुन् भने, यी हेम र चीजको लागि, म एक चुटकी नुन, काली मिर्च र केही सुगन्धित जडिबुटी वा अजमोद थप्दछु।
मशरूम, तोरी र हैम संग पास्ता
चार चीज रिसोटो